insulator fihenjanana polymer mitambatra
Ny post insulator dia be mpampiasa amin'ny rafitra malefaka mankany ambony, ho an'ny fampiharana isan-karazany dia misy ny insulator post andes sy ny post insulator.
Ny tsipika fanamafisam-peo dia napetraka eo amin'ny tsato-kazo elektrika ho an'ny tsipika fandefasana. Araka ny fampiasana sy ny toerana napetrany teo amin'ny tsato-kazo, ny insulator an'ny tsipika dia mizara karazany maromaro: Tie Top Line Post Insulator, Insulator Horizontal and Vertical Line Post, Under Arm Line Post Insulators ary Clamp Top Line Post insulator.
Ny insulator an'ny paositra dia manome fanohanana insulated sy struktural ho an'ny toby famokarana herinaratra, fampitana fampitaovana sy fizarana ary toeran-jiro hafa hatramin'ny 1100kV.
Ny insulator post dia azo vita amin'ny polymer porcelain sy silicone. Natao ho an'ny tsena samihafa izy ireo ary namboarina tamin'ny refy mahazatra, hahafahan'izy ireo mahafeno ny fepetra takian'ny herinaratra sy mekanika an'ny IEC, ny fenitra ANSI na ny fanondroan'ny mpanjifa.